Imaatinkaygii Madaxtooyada (Cheif Of Cabinet) |
Xirsi Xaaji Cali , qoraha buugga 'Miyiga illaa Madaxtooyada'
Waxay ahayd 6 am 26|June|2010 markii doorashadii madaxweynaha loo dareeray, waxaana goobahii la xidhay abbaaro 6 fiidnimo. War baa u gaajo badan. In kasta oo ay tirinta iyo hubintu wakhti qaadato, waxaa si xiisa badan loo sugayay warka natiijada doorashada, waxaana lagu yaacay xaruntii Kulmiye ee dhaatada iyo xafiiskii hawshaa qaabbilsanaa waxaana iska soo daba dhacayey wararka muraaqibiinta oo badankoodu ay soo tebinayeen guul balse ilaa subixii danbe way socdeen wararku, iyadoo ay marka horeba filashada guusha ee Kulmiye aad u sarraysay, haddana waxaa sii xoojisay xogtii iska soo daba dhacaysay, waxaa la sugayey dhawaaqa natiijada doorashada oo waxaa la hayay in Kulmiye ku hoggaaminnayo tiro badan.
Haddaba, guushii taariikhiga ahayd ee uu Xisbiga Kulmiye ka soo hooyey tartankii doorashada madaxweynennimada ee 26|June|2010-kii, arrimaha aan is leeyahay guushaa iyada ah saldhig bay u ahaayeen waxaa ka mid ahaa: Hoggaamiyaha oo taariikh facweyn iyo miisaan badan ku leh bulshada, kaadirka isugu yimi xisbiga oo aad u badnaa, barnaamij siyaasadeed fiican bulshadana ku cusbaa oo uu soo bandhigay, xisbiga Kulmiye oo toddoba sannadood mucaarad ahaa oo gaamuray iyo xukuumadda oo siddeed sannadood xafiiska joogtay isla markaan ka koobnayd koox si wanaagsan isula haysata siyaasad ahaan oo mucaaradka xiijisay, balse aan xagga horumarka iyo dhaqaalaha ku guulaysan isla markaan ay hoos u dhacday kalsoonidii bulshadu.
Waxaa la soo gaadhay 03|July|2010, waxaana la isugu yimi fagaare ay soo agaasimeen Komishinkii doorashooyinka oo kaga dhawaaqeen natiijadii rasmiga ahayd ee cododkii doorashada iyadoo loo kala helay: Kulmiye 49.59%, UDUB 33.23%, UCID 17.18%. Halkaas oo Kulmiye guushii ku raacday codod aad u tiro badanna uu ka horreeyay labadii xisbi ee kale.
Hankaygii siyaasadda ee aan muddada naawilayay ayaa ii bidhaamay. Madaxtooyaduna waxay ahayd meesha aan ku hammiyo. Guusha weyn ee xisbigayga u soo hoyatay waxay igu ridday hurda la’aan aan is waydiinayo xilkee ayaad doonataa, Silanyo safka hore ma kugu darayaa, iyo haddii aad ku guulaysato boos wanaagsan oo kuu qalma shirkaddan aad CEO ka tahay—oo aan wax sannad ka yar joogay meel fiicanna aan marinayo, mushahar aad u sarreeyana aan ka qaato oo aan nolol fiican ku haysto, run ahaantiina ahayd meel la iga jecelyahay—sidee uga tegaysaa maxaad se ku odhanaysaa?
Waxaa ka sii daran xilka ugu sarreeya ee aad xukuumadda ka heshaa waa wasiir, mushaharkiisuna waa $650, oo aan markaa waxba iigu filnayn marka loo eego halka aan jooga iyo waxa aan qaato. Wax aan galgalshaba waxaan talo ku soo ururiyay; haddii aan arko xil damiirkaygu ku xasilo oo ka jawaabaya damacayga, in aan qabto; shaqadana si wanaagsan oo aan ceeb iyo colaad midna reebin aan uga tago. Mulkiilihii shirkadda oo arkayay in badan oo shaqaalihiisa ka mid ah oo siyaasadda hunguri ka hayo oo aan ka mid ahay, ayaa warqad soo qoray, taas oo uu kula hadlayo rag badan oo aan ka mid ahay, “Shaqada iyo Siyaasadda mid doorta.” Waxaanan ugu jawaabay: “wixii mustaqbalka ah waa meesheeda, laakiin iminka siyaasad kuma foogni,” oo aan uga jeeday berrina ha ahaatee wixii mustaqbal ah waa marka uu yimaaddo, laakiin hadda wax siyaasad ah faraha kuma hayo.
Maalintii Sabtida ee 04|July|2010, madaxweynihii la doortay ayaan salaan ugu imi. Aad bay ii soo dhaweeyeen isaga iyo qoyskiisiiba, waxaanay ii sheegeen marka salaamuhu dhammaadaan in aan ku soo noqdo oo aannu kulamo yeelanno. Halkaa waxaa nooga bilaabmay xidhiidh dhow iyadoo habeenkii marka aan shaqada ka soo rawaxo aan gurigiisa ku soo mari jiray. Waanan la shaqayn jiray wixii talo ama tilmaan ah ee la i weydiiyana fikirkayga ayaan ka dhiiban jiray.
Guushii xisbiga KULMIYE ka bacdi, madaxweyne Silanyo wuxuu markiiba magacaabay guddiyo uu u diray talooyinka qaab-dhismeedkii xukuumaddiisa, isagoo maalin kasta qaabbili jiray oo la fadhiista kaadirka xisbiga iyo xubnaha kala duwan ee danaynaya in ay xil ka qabtaan xukuumaddiisa. Waxa aannu ku hawlanaa kala xulashada xubnihii golaha wasiirrada.
Wakhti aan ku qiyaasayo 9:00 pm habeennimo 20, July 2010, oo aan ku suganahay guriga madaxweynaha, ayuu madaxweynuhu u soo bandhigay Maxamuud Xaashi Cabdi in uu doonayo in uu u magaacaabo madaxa hawl-socodsiinta madaxtooyada (Cheif Of Staff). Balse Maxamuud wuxuu codsaday xil wasiirnimo in loo magacaabo, madaxweynuhuna wuu ka aqbalay. Wax yar uun ka dib madaxweynaha ayaa si lamafilaan ah iigu soo jeestay, oo ii soo bandhigay xilkaa! Waan aqbalay, balse labo shay ayaan ka codsaday oo midi ahaa in magaca uu ka dhigo Chief Of Cabinet.
In kasta oo labadan magac ee Chief of Staff iyo Chief of Cabinet labaduba ahaayeen laba magac oo gebi ahaanba ku cusbaa saaxadda siyaasadda ee Soomaalida, waxaan islahaa waxaa la garanayaa Cheif Of Cabinet. Waxaan ka eegayay Djibouti oo laga isticmaalo, aadna looga yaqaanno, oo uu xilligii hore ku shaqayn jiray madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle.
Dhinaca kale, madaxweynaha waxaan ku idhi: madaxweyne shirkadda SOMTEL oo aan in muddo kooban ah gacanta ku hayey si weyn baan u soo kiciyey, haatana meel fiican bay maraysaa. Mulkiilaha shirkadda Maxamed Siciid Ducaale oo ixtiraam badani noo dhaxeeyo, (shaqeeye/loo shaqeeye), waan ka xishoonayaa inaan ku idhaahdo waan kaa tagayaa, sidaa darteed waxaan kaa codsanayaa inaad bal igala hadasho oo aad culays ila saarto! madaxweynuhu codsigaygii wuu iga yeelay, wuxuuna u yeedhay Maxamed Siciid Ducaale, dabadeedna wuxuu ku yidhi ninkaa (Xirsi) inuu ila shaqeeyo ayaan doonayaa oo anigaa u baahane ii daa! Marka la eego halkaannu shirkadda SOMTEL marinaynay, Dahabshiil marnaba muu jeclayn inaan ka tago, aadna way ugu adkayd, haddana wuu tixgeliyey, waanu ka yeelay codsigii uu madaxweynuhu u soo jeediyey. Wuxuu ugu jawaabay “waan kaa yeelay, balse shaqaalahayga wixii dambe ii daa”
Waxaa timi Xafladdii xiisaha badnayd. Waxay ahayd 28, July 2010. Saacaddu waa abbaaro 9:00 subaxnimo. Waa maalin si weyn loo sugayay inay dhacdo xilwareejin ay xilka kula kala wareegayeen madaxweynihii hore ee Somaliland Daahir Rayaale Kaahin iyo madaxweynahii cusbaa ee Somaliland Axmed Maxamed Silanyo, taas oo shacbiga Somaliland ay filayeen inay u dhici doonto si nabadgelyo ah, isla markaana ay beesha caalamka iyo wufuuddii ka kala socday dalalka jaarkuba ay aad ula yaabeen doorasho furan oo noocan ah, xil wareejin labo madaxweyne in ay mandiqaddan si sahlan uga dhici karto.
Waa maalin taariikhi ah waxa goobta timi xukuumaddii xilka ka dagtay oo uu hoggaaminayey madaxweyne Daahir Rayaale iyo ku-xigeenkiisa. Sidoo kale, mas’uuliyiinta xisbigii Kulmiye ee ku guulaystay doorashada madaxtooyada ayaa iyana yimi goobta xarunta madaxtooyada oo lagu qabanayay xafladdii xilwareejinta iyo dhaarinta madaxweynaha cusub ee Somaliland Md. Axmed Maxamed Silanyo iyo ku-xigeenkiisa. Waxay ku dhammaatay jawi xamaasad leh oo nabdoon iyadoo madaxweynihii cusbaa sheegay in uu berrito soo dhisi doono xukuumaddiisa cusub.
Jamhuuriyadda Somaliland, muddo 17 sannadood ah may soo marin madaxweyne xilka iyo masuuliyadda ku wareejiya madaxweyne kale, laga soo bilaabo 1993-kii wakhtigaasi oo madaxweyne Cabdiraxmaan Tuur uu madaxweyne Cigaal ku wareejiyay magacii iyo haykalka guud balse aanay jirin wax macno leh oo hay’adihii dawladda ka dhisnaa oo la isku wareejiyay xilligaa. Wixii ka danbeeyeyna wax lala kala wareegay may jirin. Laga bilaabo May 1993-kii ilaa 2010-kii ma jirin madaxweyne, madaxweyne kale xil ku wareejiyay ee shaqada xafiiska uun baa iska socotay.
Madaxweyne Daahir Riyaale Kahin wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee doorasho furan oo dimuqraaddi ah intuu galay markii laga helay xilka ku wareejiya madaxweyne kale . Sideedaba, dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaanba isbeddelku ma aha arrin hawl yar. Labadaa madaxweyne ee xilka la kala wareegayna waxay ahayd dhacdo cusub oo xambaarsan duruufaheeda u gaarka ah. Markaa isbeddelkii madaxweyne Silanyo talada kula wareegay waxay ahayd rejo cusub. Dhinaca kale xafiisyadii dawladda oo dhan iyo golihii wasiirrada oo dhammaantood la beddelayo, runtii waxay ahayd isbeddel xanuunkiisa leh.
Subixii labaad ayaannu ku waaberiisannay nabad. Aad baa dhegtu u taagan tahay oo ay filashadu u badan tahay. Haddana waa la wada ogyahay in tirada xukuumaddu aad u yar tahay, marka loo eego tii ka horraysay. Guddigii talada qorshaha xukuumadda loo magaacaabay waxay ku taliyeen gole kooban oo tayo leh, waana ballantii markii horeba Kulmiye olohala ku galay. Abbaaro sagaalkii subaxnimo ayaa madaxweynihii, oo ay weheliyaan xubno kooban oo aan ka mid ahay, u soo kicitimay xaggii xarunta madaxtooyada iyadoo aad na loogu sugayo. Waxaa madaxweynuhu fadhiistay hoolka golaha wasiirrada oo saxaafaddii iyo dad tiro badani ku sugayaan dhawaaqiisa. Wuxuu akhriyay liiska wasiirrada, oo ahaa 20 wasiir iyo 6 Wasiir-ku-xigeen. Waxaan filayaa in ay ka mid ahayd xukuumadihii ugu yaraa ee soo mara xilligaa geyiga Soomaalida iyo waddamada Geeska Afrika.
Waxaa la soo gaadhay 31, July 2010 oo uu madaxweynu soo saaray wareegto madaxweyne oo uu iigu magacaabay Chief of Cabinet, kaas oo macnihiisu ahaa madaxa hawlaha shaqo ee madaxtooyada. Isla markii xilkaa la ii magaabayba, waxaa ila dhashay faallo, hadalhayn iyo buuq aad u badan oo qaarba wax ku magacaabeen (Waa raysal wasaare, waa wasiir dadban, waa agaasime, waa madaxweyne jiifa, isagaa dalka haysta iwm). Hadalhayntii iyo dareenkii bulsho ee aan la kowsaday ee ku xeernaa xilkii la ii magacaabay, maan helin jaanis dadku ku cabbiraan aqoontayda, waaya aragnimadayda iyo kartidayda shaqo, dib ayaan ka faahfaahin doonaa xilkii Chief Of Cabinet-ka iyo qayladii ku gadaannayd balse aan wax ka tilmaamo jawigii siyaasadda iyo markii madaxweynuhu ku dhawaaqay xukuumaddii cusbayd.
Markii madaxweynuhii soo saaray liiska xukuumaddiisa ee ay iska waayeen in badan oo madaxdii xisbiga ah iyo hawlwadeennadii xisbiga ee qurbaha iyo dalka gudihiisa isaga yimi oo filashadooduna aad u sarraysay, waxa na hadheeyay buuq siyaasadeed oo salka ku haya tabashada ashqaasta iyo qabaa’ilka ay ka soo jeedaan. Waxaa la yaab ahaa dhammaan xubnaha xisbigu waxay isla waafaqsanaayeen in xukuumaddu yaraato haddana qof kastaa wuxuu doonayaa in uu ku jiro!
Xukuumaddii koobnayd, iyo siyaasiyiintii iska dhex waayay waxay keentay in saaxiibbo badani ay naga hor yimaaddaan. Waa arrin xanuun badan, marka xisbigaagii mucaarad kugu noqdo. Qaraxaa siyaasiga ah ee xukuumaddu la kowsatayna muu ahayn arrin sahlan, maarayntiisuna may fududayn.
Kulankii u horreeyay ee madaxweynuhu u qabto xubnihii uu soo magacaabay oo ahaa is barasho iyo in qof kastaa shaqadii ku dhaqaaqo iyada oo laga shidaal qaadanayo barnaamijkii xisbiga iyo ballanqaadyadii bulshada loo sameeyay, waxaa isla markiiba soo ifbaxay filanwaaga xubnihii cusbaa kala kulmay xafiisyadii ay la wareegeen oo ay degalkii cusbaa kala kulmeen xero-dagdago. Waxaan uga jeedaa intooda badan xilka wasiirnimo wuu ku cusbaa, dadka shaqaalaha ee ay xafiisyada ugu tageenna ismay garanayn oo way isku cusbaayeen, meesha ugamay iman kharashkii hawl socodsiinta ee shaqada lagu kala wadi lahaa hadday tahay shidaal iyo agabkii xafiiska, iyado weliba qof kasta saaxiibbadii iyo ehelkiisii u arkayeen in uu madax noqday oo marti iyo shaxaad loogu imanayey, lacag yar oo dejin ah oo masuuliyiinta madaxweynuhu u qorayna wasaaraddii maaliyadda way ka waayeen, oo waabay madhnayd khasnadda dawladdu. Waxaa ugu sii darnaa wasiirkii maaliyadda ee xilligaa, Maxamed Xaashi Cilmi, oo goor galab ah guriga madaxweynaha ugu yimi anigoo la jooga oo aannu fadhinno berendhaha guriga.
Waxa aannu warbixin ka siiyay madaxweyanaha xaaladda maaliyadeed iyo duruufaha dhaqaale ee ka jira wasaaradda maaliyadda. Wuxuu sheegay 121 Billion oo SL shilin ah in xisaabta/Acc. maaliyaddu uu cas yahay, (macnaha dayn ku jirto)! Iyadoo ilaa afar biloodna aan shaqaalihii dawladdu mushar la siin oo weliba ciidamada wixii mushahar loo siin lahaa aan lahayn wakhtigan. Waxa aannu si mug leh isu dul taagay xaaladda aannu wajahnay ee maaliyadeed.
Madaxweyne Silanyo oo aad uga naxsanaa xaaladda iska soo daba dhacaysa iyo wararka hay’adihii dawladda ee aan farxadda badnayn ee uu la kowsaday iyadoo bulshaduna si aada uga sugayso isbeddelkii uu ballan qaaday, ayaa galabtaa warkii wasiirka maaliyadu aad u xanuunjiyay. Wuxuu yidhi “Waar meeshii aynu ku soo soconnay ma sidaasaa!” Haddana wuu isu jawaabay oo wuxuu yidhi: “Waar adeer maxaa innagu watay, Ilaahaw yaa haraggeedii inagaga celiya ayaa nin laga sheegay!” Maxamed Xaashi buu waydiiyay maxaad xal haysaa? Maxamed Xaashina wuxuu yidhi “horta xalka waxaa ka horreeya dadkii masuuliyaddan lahaa ha la xidho!” Wuxuu madaxweynuhu ku celiyay “oo adeer ma madaxweynihii aan meesha kala wareegay ayaan soo xidhaa?! Soomaalidu waa qabaa’il e, sidee qaran inoogu jirayaa!”
Markii ay labo saddex jeer isku celceliyeen dooddii, ayuu dhinacaygii u soo jeestay. Waxaan idhi madaxweyne waxay ila tahay haddii aynu soo xidhxidhno xukuumaddii aynu usbuucan kala wareegnay xukunka, waxay u muuqanaysaa aargoosi, horana uma socon karno oo buuqa hadda inagu furan ee xisbigeennii ayayn ka dabdaalan la’nahay ee waxay isu beddeli qaab qabyaaladeed oo waxay ina gelin kartaa jawi cakiran. Waxaan ku ciliyay bal goor kasta ha la xisaabtamo ee aan hore u soconno oo xalkii aynu kaga bixi lahayn mushkiladda taagan aan ka fekerno. Anigu waxaan hayaa fekrad aynu duruufta maaliyadda kaga dabaalanno, waxaanay tahay in aynu ganacsatada isugu yeedhno oo lacag dayn ah oo shaqada dawladda lagu dhaqaajiyo ka dalbanno.
Madaxweynuhu aad ayuu ula dhacay hadalkaygii, waxa aannu caado u lahaan jiray “Allaa yakhaliik, adeer waa fekrad fiican” in uu yidhaahdo markan oo kale. Balse wasiirkii maaliyaddu kuma farxin hadalkaygii, waxaana ka muuqatay in uu doonayo in la soo xidhi wasiirkii maaliyadda iyo madaxdii kale. Sidoo kale waxaa saxaafaddu soo qortay in uu qoraal u diray madaarka oo uu leeyahay in aanay madaxdaasi dalka ka bixi karin, isagoo shaaciyay in aannu diyaar u ahayn in uu kala wareego xilka ay la socdaan daymanka iyo culaysyada maaliyadeed. Waxaa sidoo kale madaxweynaha cabasho ugu yimi wasiirkii hore ee maaliyadda, Cawil Cali Ducaale, isagoo sheegaya in wasiirka maaliyadda ee cusubi xilkii kala wareegi waayay, warqadna u dhigay madaarka.
Cabbaar ayaa fekradihii la isku celceliyay, ugu danbayna waxa su’aalo la iga waydiiyay qaabka loo dhigayo fekraddii aan soo jeediyay ee ganacsatada iyo in dhaqaale laga baadi doono. Madaxweynuhu wuxuu yidhi labadiina ayaa arrintan iiga dhuun daloola ee ka soo fekera sida ugu fiican. Ugu danbayna Maxamed Xaashi oo hadalkaygii hore ka xumaaday ayaa ku tiraabay “Waxaynu ku noqonnay halkii laga soo bilaabay ee ganacsatada daynta la waydiiyay xilligii ina Cigaal. Bal Xirsiyow wixii aad hayso soo qor oo waa inoo berrito.” Waxaan 6:am ku ballannay Hotel Maansoor.
Waxa aannu isu nimi xilligii aannu balansanayn. Waxa aannu isla eegnay qoraal kooban oo aan soo diyaariyay. Guud ahaan lacagta aan ganacsatada ka dalbanaynaa waxay dhamayd $6,000,000 (Lix milyan oo Dollar). Waxa aannu isla eegnay xaddiga ganacsatada aan u soo qorsheeyay in mid kasta la waydiiyo wax go’a, iyada oo la eegayo sida ay u kala jeeb roon yihiin. Waanu isla qaadannay qorshihii, madaxweynihiina wuu nala qaatay. Wasiirkii wuxuu soo jeediyay in aan dhammaan hoolka weyn ee guriga madaxweynaha ku ballamiyo. Waxaan qoray waraaq aan u kala diray ganacsatadii waaweynayd ee noo qorshaysnaa, taas oo aan ku wargelinayo in madaxweynaha iyo wasiirka maaliyaddu shir ugu yeedheen.
Ganacsatadii waa yimaaddeen. Salaan iyo is waraysi kooban ka dibna shirkii ayaa furmay. Wasiirkii maaliyadda iyo madaxweynihii waxay u soo qaddimeen ganacsatada dalabkii lacagta guud ahaan iyo gaar ahaan mid kasta inta laga doonayo, baahida kelliftay iyo daynta masuuliyadeed in ay qaadayaan labadoodu muddo koobanna ugu soo celin doonaan. Guud ahaan ganacsatadii way aqbaleen waxaanay yidhaahdeen shirkad kasta wixii aad ku qorteen kala ballama. Muddo ayaannu ka shaqaynaynay aniga iyo wasiirkii, ugu danbayna waxaa soo xarooday 63% qiyaastii.
Markii aannu isu geynay dayntii noo xarootay iyo dakhligii cusbaa, oo wasiirku xisaab cusub (New Account) u sameeyay, waxaannu qorshaynay in aannu 70% ku bixinno mushaharradii shaqaalaha ee taagnaa iyo wixii dayman daruuri ahaa, halka 30%-ka hadhay aan u qoondaynay in aannu u isticmaalo kharashaadka maalinlaha ah ee kala socodsiinta hawlaha dawladda.
Waxay ahayd arrin culayskeeda leh, dal dhaqaale ahaan aad u burbursan, bangi dhexe oo aan wax kayd ah lahayn, shaqaalaha dawladda oo aan dhawr bilood wax mushahar ah qaadan, ciidamada qaranka oo mushaharkoodii cidhiidhi ku jiro. Xukuumadda madaxweyne Silanyo waxay dhaxashay deyn iyo amaah baaxad leh. Caqabadaha dhaqaale iyo kuwo bulsho ee xukuumadda cusub horyaalley aad bay u baaxad weynaayeen.
Xaqiiqo ahaan tallaabooyinkaa aan soo xussay waxay naga siiyeen waxoogaa debec ah culayskii maaliyadeed ee na haystay, balse waxa xukumadda laga sugayay in ay labanlaabto mushaharka shaqaalaha iyo ciidamada oo ay ballan qaadday xilligii ololaha. In kasta oo wasiirku u dhashay nin madax-adag, haddana wuxuu garwaaqsaday talooyinkaygii dhinaca maaliyadda waxa aannu madaxweynaha waydiistay in aan maalin kasta galinka hore la shaqeeyo. Waxa aannu isu iman jiray subax kasta intii aannu ka soo kabanaynay duruuftii dhaqaale ee qallafsanayd. Markii aannu ka soo kabannay culayskii na haystay ee maaliyadeed, waxaan ku mashquulay hawlihii madaxtooyada iyo shaqadii xafiiskayga.
Hawlaha adduunyada ayay caadeeda tahay tallaabo marka aad qaaddaba, mid kale ayaa kuu dhiman. Mushkilad marka aad xallisaba, mid kale ayaa ku sugaysa. Dhacdooyinkuna way kaa dheeraynayaan oo kuguma simaan sida aad doonayso..
Nidaam kasta oo ku cusubi, waa dhacdo la fili karo inay la kulmi karto caqabado iyo suuldaarrooyin qorshaysan oo ay wadaan kooxo iyagu xusulduub ugu jira sidii ay maamulkaa cusub u fashilin lahaayeen ama ay uga faa’idaysan lahaayeen goldoloollada iyo wixii ka baylaha nidaamkaa cusub.
Intii aannu la legdemaynay hawlihii maaliyadda iyo qaar kale oo badan oo maxalliya, taariikhdu markii ay ahayd 10, 09 2010, ayaa waxa na soo gaadhay qaylo-dhaan sheegaysa in malayshiyo ilaa 300 oo ruux ah oo ka tirsan jabhadda ONLF ee la dagaallanta dawladda Itoobiya ay ka soo degeen magaalada Caasha Caddo ee xeebta galbeedka Somaliland, kuwaas oo ku wajahnaa dalka Itoobiya. Dawladda madaxweyne Silanyo ee aan ka tirsanaa waxay markaa talada dalka haysay muddo 43 habeen ah. Maadaama oo aannu cusbayn, aad ayaannu u nuglayn cid kastaana waxay doonaysay in ay ka faa’idaysato mushkiladaha na haystay. Wuxuu madaxweynuhu amray in taliyaha ciidamadu diyaariyo ciidamo si adagna uga hawl galo, isla markaana wuxuu amray in talo ay isugu yimaaddaan dhammaan ciddii ay khuseeyeen arrimaha nabadgelyadu.
Xukuumad ahaan waxay nagu ahayd dhacdadani naxdin, fejac iyo lamafilaan, qorshihii iyo qaabkii arrinkaa loo waajihi lahaana may diyaarsanayn. Markii ay arrintaasi dhacday waxa aannu xidhiidh iyo wadashaqayn toos ahba la yeelanay dawladda Itoobiya oo ah dawlad awood badan oo uu xilligaa hoggaaminayey raysal wasaare Meles Zenawi. arrintaa xukuumaddu cusub la kowsatay waxay ahayd mushkilad hor leh, run ahaantiina gobolka waxay ku keeni karaysay halis iyo nabadgelyo-darro. Si wadajir ah ayey labada dawladood ee Somalilnad iyo Itoobiya isaga kaashadeen arrintan. Sida aan maqlay, malayshiyadii badankooda waa la qabtay, wixii kalena way kala yaaceen oo wax saamayn ah labada dhinac mid kumay yeelan.
In kasta oo ay xukuumaddii aan ka tirsanaa ay ku dedaashay in ay xakamayso xafiiltan dhaqaale iyo khilaaf diimeed, haddana waxaa nagu bilaabmay maalintii natiijada lagu dhawaaqayba muran xooggan oo u dhexeeyay ganacsato isku eryanayey hanashada xadhigga badda hoosteeda mara ee (Fiber Optic Submarin Cable), kaas buuqiisu na hadheeyay muddo labo sannadood ku dhow. Wuxuu ahaa mushkilad aad u weyn oo dhaawacday hannaankii siyaasadeed ee xukuumadda cusub. Odhaah caan ah oo Soomaaliyeed ayaa tidhaahda “Il ribix arkaysaa rixim ma eegto,” taasoo macnaheedu yahay qofka macaashka doonayaa walaalnimo iyo naxariis toona ma eego. Ganacsatadu way iska damac badan yihiin oo meesha macaashku ugu jira wax walba way ka horraysiiyaan. 15|08|2010 waxaa madaxweynaha u yimi dad waaweyn oo miisaan leh oo aan ka xasuusto Muuse Biixi, Samaale, Samsam Cali Aadan, Cali-Gobonnimo iyo Aamina Timadheer, oo uu soo abaabulay ganacsade Maxamed Aw Siciid. Wuxuu waydiistay madaxweynaha in xadhiggii badda hoosteeda marayay rukhsaddiisa la siiyo iyada oo uu u xidhan yahay oo aan cid kale la siin karin (Exclusive).
Madaxweynuhu wuu u ogolaaday rukhsadii. Bixinta dhibi kama taagna oo madaxweynuhu waabu ka oggaaladaye, waxaa doodi ka bilaabantay in loo xidho. Waxaan soo saaray in arrintu Dastuurka Somaliland ka soo horjeeddo, oo dastuurku wuxuu odhanaya “Dawladdu waxay dejinaysaa siyaasadda guud ee dhaqaalaha, oo ku salaysan mabaadi’da suuqa xorta ah.” Balse dhammaan intii hawsha kula socotay way ku raacsanayeen arrintaa.
Waxaa ugu debecsanaa Muuse Biixi oo yidhi waar Dastuur yaynaan jebin e xal kale inoo doona. Ugu danbayna madaxweynuhu wuxuu siiyey rukhsad caadi ah, laakiin uma xidhan (not exclusive) Waxaa iyaguna kacdoon xoogan sameeyay qolyihii kale loo diiday oo si laxaad leh ayay uga hor yimaaddeen, culays badanna saareen xukuumaddii cusbayd Xagga xoolaha nool marka la eego, waxa murankiisu taagnaa arrinkii Maxjarka Cusub ee Berbera oo xukuumaddii talada wareejisay ay ganacsadihii Carbeed (Al-Jaabiri) oo ay dhoofinta adhiga ugu xidhay kootada. Ganacsadayaal badan ayaa arrintaa ka biyo diiday isla markaana waxay ku doodayeen in maxjar kale la furo oo aan cidna kooto loogu xidhin.
Arrintaasna waxa loo baahnaa in laga gaadho xal waara, in kastoo qaylo badani ka soo yeedhay dhinicii hore maxjarka u lahaa, haddana waxaa lagu dhiirraday in la furo maxjarkii kale, si loo helo suuq xor ah. Caqabadda kale ee xagga dhaqaalaha ah waxay ahayd arrintii Haamaha Shidaalka Berbera oo muddo dheer gacanta dawladda ka maqnaa, oo ay shirkadda TOTAL muddo dheer kooto ku haysatay. Xukuumaddu arrintaa waxay ka qaadday tallaabo, masuuliyaddii haamahana waxay ka wareejisay shirkadda TOTAL, dabadeedna maamulkii haamaha shidaalka waxay ku soo celisay gacanta dawladda. Kaddibna arrintaa waxaa ka dhashay buuq kale oo hor leh. Waxa mar kasta jira oo aan la dhayalsan karin doorka iyo kaalinta ay bulshada siyaaddada ku leeyihiin ganacsatadu iyo sidoo kale muhiimadda ay dalka guud ahaan u leeyihiin. Sidoo kale waxaa hubaal ah haddii ganacsatada lagu sii daayo maamulka iyo dawladnimada, waxaa dhacaysa xadhig kala jiidasho iyo in mid kastaa uu danihiisa u xusliyo, oo halkaa ay cidhiidhi ku gasho dantii caamka ahayd iyo qarannimadii.
Guud ahaan, hannaanka maamul si uu horumar u sameeyo wuxuu u baahan yahay deganaansho siyaasadeed iyo jawi nabdoon oo u hawl yareeya tallaabooyinka horumar. Maadaama oo markii xilka lay magacaabay aan ahaa maamulaha guud ee shirkadda Somtel (CEO) oo ay jireen shirkadihii ganacsi oo tartan naga dhexeeyey, waxaa aad muhiim iigu ahayd sidii aan u xaqiijin lahaa dhexdhexaadnimada iyo gudashada masuuliyadeed ee aan ugu adeegayo bulshada dhammaan, iyada oo wax dareen ahi aannu noo dhaxayn, isla markaana aan ganacsatada ugu abuuri lahaa kalsooni iyo in ay nidaamkan dawladeed si siman uga helaan adeegga shaqo ee ay uga baahan yihiin, baqdin la’aanna u shaqaysan lahaayeen.
Haddaba Xirsi ahaan, halkii aan joogay iyo shirkaddii hawsha yarayd waa anigii ka imi oo siyaasad ayaan u tafaxaytay, himiladii ii rumawday, masuuliyad culus iyo xil cusub oo awood badanna qabtay; balse waxaa wehelinayey hadalhayn, buuq iyo dacaayado aad u badan oo bilowgiiba ila kowsaday. Xisbigaygii iyo taageerayaashiisii ayaaba ugu qaylo dheeraa. Waxaan u bixiyay xilkii Buuqsiraate (A noisy resposibilty). In ka badan 6000 oo maqaal iyo odhaahyo ayaa laga jeediyay oo aad ka helaysaa Internetka oo keliya, qof kastaana meeshuu doono ayuu ula kacay siduu jeclaana wuu u fasirtay. Waxaynu ka sawiran karnaa, maansadan uu berigaas curiyay Axmed Cali Garas (Maqalloocshe), oo wargeyska Haatuf oo mawduuc toddobaadle ah ku qori jirey. Waxaynu ka soo qaadan in kooban:
Ma Xirsaa ka dambeeya
Haddii xaajiyad qaad ahi,
ma Xirsaa ka dambeeya?
Haddii gaadhi xamuul ah
xuduudkaa laga jiito
oo Itoobiyanku xidhaan ma Xirsaa ka dambeeya?
Adiga oo yar xanaaqay, haddaad xaaska dhirbaaxdo, oo xabsigaa lagu geeyo ma Xirsaa ka dambeeya? Xafladdii Muqdishee, bambka wayn la xuluushay ma Xirsaa ka dambeeyay? Xaafad, xaafado shiidday, xangaruufo mid gaadhay, ma Xirsaa ka dambeeya? Haddii aalad xumaatay, xagal daaco samayso, ma Xirsaa ka dambeeya? Wax kastoo la xumeeyo ma Xirsaa ka dambeeya?!
Maansadani waxay ka mid ahayd dareemadii dadka ku jirey, warbaahintuna qorayeen xilligaa. Haseyeeshee, qof kasta oo xil iyo masuuliyad qaran loo dhiibay, waxa looga fadhiyo ee laga sugayaa waa inuu shaqadii loo diray sida uga habboon u guto, ugana midho-dhaliyo. Buuqaas waxyaalaha aan is leeyahay sabab iyo saldhigba bay u ahaayeen waxaa ka mid ahaa:
Waxaa xaqiiqo ah magaca iyo mansabka (Chief of Staff / Chief Of Cabinet) in ay gebi ahaanba ku cusbaayeen saaxadda siyaasadda Soomaalida oo aan hore looga aqoon, iyadoo weliba aanay qeexnayn shaqadiisa iyo awooddiisu toona. Dhinaca kale, shaqadani waa mid qaylada iyo eedda caan ku ah. Xikmad laga soo tebiyey Donald Rumsfeld oo Maraykan u ahaa Chief of Staff 1974, ayaa odhanaysa: “If you are not criticized, you may not be doing much – Haddii aan lagu eedaynayn, hawshaadii wax badan kamaad qaban.”
Shakhsi ahaan, anigoo ahaa nin dhallinyaro ah oo aan hore uga mid ahaan jirin qamaamuurtii iyo qoorweyntii saaxadda siyaasadda ku soo gaamuray ee ay dadku yaqaanneen iyo hebelladii indhahooda iyo aragtidoodaba ku waynaa, siyaasiyiintaa oo inta badan cid kasta oo cusub geeska ku feedha ama didsada, maadaama oo aannu weli soo shaac bixin ama aqoontiisa, garashadiisa, shaqadiisa iyo kartidiisaba aanay dadku weli si wayn u tijaabin. Waxaad arkaysaa mararka qaar bulshadii xaakimka u noqon lahayd kii wax hagaajiyay iyo kii wax xumeeyey, waxaa dhegahooda haysta oo ay u afduuban yihiin horjoogayaasha siyaasadda ee ku gaamuray saaxadda. Waa shaqo kuu taala sidii aad u jiidhi lahayd ama aad gidaarkaa u jebin lahayd.
Dad badan oo Kulmiye xilal ka sugayay ayaa is waayay. Dhinaca kale, xukuumaddii ugu horraysay ee Kulmiye waxaa xilal muhiim ah ka qabtay rag cusub oo da’ yar, iyo waliba rag aan kaadirka xisbiga hore uga muuqan.
Wax-u-quudhi-waa (xasad) aadamuhu guud ahaanba iska leeyahay, gaar ahaan xawaarihii aan ku dhaafay tiro badan oo jeclaa in ay muuqdaan oo la sheegsheego.
Maadaama oo aan joogay meel aad u xasaasi ah oo ahayd hilinkii ama albaabkii loo sii marayey madaxweynaha Somaliland. Kuwa guuldarraystaa ma aqbalaan fashilka naftooda balse waxay u raadiyaan cudardaar, in badan waxaa u fududaatay inuu aniga iga dhigto gabbood oo uu yidhaahdo Xirsi baa ii diiday! Xataa kuwa shaqadooda ku saaqida ee laga eryo ayaa ku andocoon jiray Xirsi baa na eryey!
Waxaa iyana meesha taallay madaxweyne Silanyo oo ahaa hoggaamiye caan ah oo aad u shacbiyad badan oo dalabka iyo doonistiisu ay aad ugu badan yihiin, markaad la shaqaynayso ee aad masuul ka tahay kaalinta iyo darka laga kala horayo mawjadaha bulshada ee ku sii qulqulaya xafiiska uu fadhiyo. Waxaad dareemi kartaa inay goobtaasi tahay goob culayskeeda leh.
Qof ahaan, talo waxaan ku ururiyay in aan hore u socdo. Ninkii hadlayaaba ha iska hadlo e, in aan wixii hawl iyo shaqo ii yaalla ama shaqadayda khuseeya ku tooso, daacadna u ahaado cidda aan la shaqaynayo. Sidoo kale, waxaan isku dayey in aan si joogto ah naftayda ugu baraarujiyo, uguna dhiirri geliyo in aan ummaddayda u shaqeeyo, taas oo ah samafal aan xasanaad ku heli doono aakhiro, iyo in aan qabto shaqo ii suurto gelin karta inaan ku soo baxo taariikhda, isla markaana aan ku muujin karo kartidayda iyo awooddayda qof ahaaneed.
Si kasta oo aad u tahay geed-adayg iyo qof adkaysi badan, haddana bini-aadam baad tahay dareen iyo damqashoba leh oo mar uun ka digiigixan kara qardofooyinka iyo qaladaadka aan sababta lahayn ee sida joogtada ah laguugu hayo. Haddaad og tahay qaladaad aad samaysay (kuwo shaqo ama kuwo siyaasadeed), dabcan waad ka garaabi kartaa wixii lagugu maagayo. Laakiin mushkiladdu waxay tahay markaad maalin walba la kulanto dhaliil iyo dhaleeco xad-dhaaf ah oo aan guushaada iyo guul-darradaada midna la xidhiidhin, aqoontaada iyo garashadaada la xidhiidhin, balse halbeeggu keliya uu yahay: “Xirsi waa inan yar oo dhallinyaro ah oo aan hore loo aqoon ama madaxweynaha ayay isku dhow yihiin; Halkiisa anaa ku wanaagsanaa iyo maxaan Xirsi u noqon-waayay!!” Gaar ahaan markaan gurigayga tago ee sariirtayda jiifo ayaan naftayda la showraa.
Su’aalaha aan had iyo jeer isweydiin jiray waxaa ka mid ahaa: waa maxay sababta lagugu eryanayaa ee lagugu maagayaa? Miyaanad ahayn muwaadin Somalilander ah oo xaq u leh inuu xil iyo mansabba dalkiisa ka qabto, shaqadii laguu diray maxaad qaladday ama aad ka gaabisay? Yaad wax gaar ah ka gashay?
Xilkii la ii dhiibay waa mid siyaasad maamulaya, oo muu ahayn mid bulshada xidhiidh la leh oo aan adeegyo siinayo, sida dadka ka shaqaynaya caafimaadka iyo beeraha. Balse waxaa inta badan shaqo na dhexmaraysaa siyaasiyiin xafiiska dano kaga xidhan yihiin. Muu ahayn xil ama jago siyaasi ah oo aan siyaasadda si toos ah ugu ban bixi karo. Waxaan fadhiyaa golihii wasiirrada, laakiin cod ma lihi oo wasiirrada ayuun buu xeerku cod siinayaa.
Waxaa jiray nin oday ah oo maalin sheeko nooga sheekeeyay. Wuxuu yidhi “Anigoo, Suuqa maraya ayaan arkay buuq iyo dadkii oo isku murugsan oo yool hortaydii ka jiro. Nin ayaan waydiiyay maxaa dhacay? Ninkii wuxuu iigu jawaabay Xirsi ayaa halkaa ka xiiranaya oo waddada loo kala xidhay. Markaas ayaan is idhi waar Xirsiga warkiisa kaa bataye soo arag oo aan soo tallaabo dheereeyay. Markii aan goobtii imid waxaan kula kulmay labo gaadhi oo isgalay, markaas ayaan u qaadan waayay oo yaab iyo amakaab Ilaah ii keenay!” Markaa waxyaalahaa iyo waxyaalo la mid ah ayaa socday xilligaa.
Iska daa culayskii ay igu hayeen siyaasiyiinta aan weli ku jirin xayndaabka xukuumadda ee weli damacoodii iyo hankoodiiba dibedda la gaafwareegaya, waxa dhacdo xanuun badan ahayd cadaawadda, dacaayadda iyo eedaymaha aan kala kulmi jiray siyaasiyiinta iyo masuuliyiinta iyagu xukuumadda igula jira. Waxaana keenayay marka qof masuul ahi uu fikir ama ra’yi uu soo diyaarsaday oo uu doonayo inuu madaxweynaha mariyo, marka aan ra’yi ka soo jeediyo, ama aan talo ka keeno ama aan bayaamiyo xog iyo xaqiiqo isaga ka soo horjeedda oo taalla xafiiska madaxweynaha oo aan masuul ka ahay, marnaba may jeclaysan jirin waxaanan kala kulmi jiray cunfi iyo dagaal.
Waxaan go’aansaday in aan la imaaddo karti iyo hawlkarnimo aan ku muujinayo in dhallinyaranimada, cusaybka iyo da’ yaraantu aanay noqon karin nusqaan iyo dhaliil muwaadinka da’da yar leh loo nisbeeyo oo ka hor-istaagi karta inuu qarankiisa ka qabto xil iyo masuuliyad muhiim ah oo uu bulshadiisa ugu adeego. Sidoo kale, haddii ay dhacdo da’da oo la isku xaqiraa waxay su’aashu noqonaysaa xaggay isku taagaysaa ileen qof kastaa qofka ka yar ayuun buu u daliishan in uu ku dhaliilo inta uu ka yar yahay e? Bal qabso oo da’dayduna markaa maba yarayn, oo qof 40 sannadood gaadhay dee ma yara! Bal muxuu yeeli qofka intaa ka sii yar, balse aqoontiisii iyo garashadiisiiba ay u bislaadeen inuu bulshadiisa u adeego!
Dhinaca kale, maadaama aad la ii hadalhayo waxaan qaatay bal in muddo ah inaan gebi ahaanba ka gaabsado xidhiidka saxaafadda qalad iyo sax kuu doono ha ahaadee. Haddaba, maadaama xidhiidhkaygii iyo muuqaalkaygii saxaafaddu uu aad u yaraa, oo hadalladii iyo dacaayadihii la iga faafin jiray ee xaqiiqda ka fogaa aanan hadal iyo qoraal midnaba kaga jawaabi jirin. Bulshada cid waliba dhankay doonto ayay u qaateen. Dadka qaar baa ii haystay inaan ahay nin meesha lagu hayo oo garab iyo hayb reernimo xilka lagu siiyey. Kuwo kale ayaa iyaguna ii haystay agnaan aan hadalka aqoon iyo nin aan wuxuu doonayo gudbin karin. Muddo sannad ah ayaan saxaafadda gebi ahaanba afkayga ka dabooshay, waxaanan ku mashquulay oo aan wakhti iyo dedaal badan ku bixiyey shaqadii iyo masuuliyaddii la ii igmaday.
Tacabkii iyo waqtigii badnaa ee aan xafiiska ka shaqayn jiray 16 saacadood iyo wax la mid ah wuxuu ii keenay in bulshada intii aannu wadashaqaynta lahayn (rag iyo dumarba), shacabkii xafiiskayga danaha ka lahaa, iyo bulshada intii aannu isgaadhi karaynayba ay ii soo noqdaan oo ay garwaaqsadaan tayada iyo kartidayda qofnimo.
Laakiin, ummaddii kale ee aanan xidhiidhka tooska ah iyo mid dadban midnaba aanan la lahayn ismaannaan helin, dhegahoodana waxa ka badatay dacaayadihii aniga la iga baahin jiray. Hal sano ka dib waxaan go’aansaday in la gaadhay xilligii aan saaxadda iyo saxaafadda u soo banbixi lahaa ee aan bulsho-weynta si toos ah ula hadli lahaa.
Dabcan may ahayn markii aniga iigu horraysay ee aan saxaafadda la macaamilo amaba muuqaalkayga laga arko shaashadaha, wargeysyada iyo bogagga internetka. Xilligii aan guddoomiya-ku-xigeenka Komishinka Doorashooyinka Qaranka ahaa, bulshada in badan oo ka mid ah ayaa magacayga iyo muuqaygaba saxaafadda ka baratay.
Shaqada Madaxtooyada taallay waxay ahayd mid aad u hawl badan, oo isugu jirta: Maamulidda shaqooyinka maalinlaha ah, la macaamilidda siyaasadda maxalliga ah ama debadda wixii khuseeya madaxweynaha ee shaqo u baahan, kala hufka wararka kala duwan ee muhiimka u ah madaxweyna, xidhiidhka hay’adaha kala duwan ee dawladda ee madaxtooyada wax uga baahan, iyo xal u helidda mushkiladaha wixii soo dhaafa ama ka tan bata hay’addii ay khusaysay ee madaxtooyada taageero uga baahata. Ogow waxyaalo badan oo aan masuuliyaddaada ahayn ayaa cilaaqo la leh shaqadaada, oo mushkiladaha masuul kama tihid dhicistooda waxaa se xil kaa saaran yahay xalintooda.
Caadooyinka siyaasadeed ee wakhtigaa jiray oo ahaa in dadku caam ahaan noloshoodii oo dhami siyaasadawday oo qof ay shaqadiisa tahay siyaasaddu iyo mid aanay khusayn labaduba ku fooggan yihiin siyaasad. Waxaan odhan karaa siyaasaddii waxaa laga dhigtay camal loo shaqo tago. Marka laga tago dadka danta ka leh iyo dadka kale ee doonaya in ay yimaaddaan xafiiska madaxtooyada qalad iyo sax waxay doonaan ha u doonaan, waxaa ka sii culays badnaa dadka masuuliyiinta ah ee madaxtooyada doonaya ama cid u wada, (tusaale 26 wasiir, 164-ka xildhibaan ee labada gole iyo boqolaal madax dhaqameed ah). Inta badani waxay u socdaan xil ama xoolo. Maalintii waxaa kaaga soo hagaagaya ugu yaraan 30-50 qof oo madhaafaan iyo birmagaydadii bulshada ah. Waa dadkii masuuliyiinta ahaa ama ixtiraamka kaa mudnaa. Si kasta oo aad u nidaamiso, u qanciso ama joojisaa waxay abuuraysaa tabasho iyo dareen taban.
Isdiidsiin iyo maya, idin qaabbili maayo kuma habboona siyaasadda—oo halbawlayaasha siyaasadda ayay ka mid tahay gaadhista bulshada, dhegaysiga iyo inaad duruufahooda u kuurgasho. Markaa dadka ayaan gaadhayaa, horjoogayaashoodiina waa is diidsiinayaa ama inkirayaa isu kaa qaban mayso. Dabcan shaqadiina dhaawac ayay ku tahay marka safaf dhaadheer uun laguugu jiro ee wakhtigaaga shaqo noqdo in aad dadkaa kala horto. Annaga waxaa noo dheeraa duruufo noo gaar ah.
Markii xaalku halkaa marayo, waxaan isku dayay in aan xal ka dhigo in aan saacadaha shaqada labalaabo oo aan xafiiska joogo saacado badan. Waxaanan isku deyi jiray in aan wax diyaariyo xilliyada dadban ee habeenkii. Waxaa nafis iyo nasasho ii noqon jirtay wakhtiyada safarka ee aannu meel u baxno. Waxaan dareensanahay dedaal kasta oo aan samaynay, in aannu waxyaalo badan oo noo qorshaysnaa ka gaabinnay sababtaa aan kor ku soo sheegay darteed.
Haddaba, in kasta oo ay jirto xigmadda Soomaaliyeed ee tidhaahda “nin xil qaaday eed qaad,” dabcan, qof kastaba waa la dhalliili karaa, waana la dhaleecayn karaa, balse waa inay jiraan sababo muuqda oo saldhig iyo daliil u ah dhaliisha. Markaa ayay wax toosisaa ama dhistaa. Qofka masuulka ah sababaha iyo sifooyinka lagu dhaliili doono ama lagu bogaadinayo, caqliga suubbani wuxuu ina siinayaa in halbeeggu uu noqdo kolba siduu u guto xilkii iyo masuuliyaddii loo igmaday.
Xaqiiqadu se qofka xil haya ee aan qabanin shaqadii loo diray wuu fashilmaa. Balse qof wax qabtay wixii uu qabtay ama qalday ayaa wax laga sheegaa. Waxaana dhaxal noqda waxa uu ka tago ee uu qabto xilligiisa. Kaas ayuun baa taariikhda gala, kana markhaati furtaa guushiisa. Mararka qaar dhaleecayntu xayaysiis ayay noqotaa oo dadku waxay doonaan waxa la hadalhayo in ay wax ka ogaadaan. Waxa laga weriyey halgamaagii caanka ahaa ee Malcolm X: “If you have no critics, you’ll likely have no success – Haddii aanad cid ku dhaliilbsan lahayn, waxay u dhowdahay inaanad guulba gaadhin.”
Dhacdooyinka siyaasadda midiba midda kale way ka sii daran tahay. 30, Aug 2010 subaxnimadii hore ayay ila soo hadashay marwada madaxweynuhu iyadoo naxdini ka muuqato hadalkeeda, waxaanay ii sheegtay in arrini soo korodhay oo aan u imaaddo. Aniga oo naxsan ayaan soo baxay. Waxaan gaadhay gurigii madaxweynaha anigoo aad u naxsan. Marwadii ayaa ii soo baxday, waxaanay iiga warrantay in xalay madaxweynaha xaaladi ku soo korodhay, oo uu yidhi waan iscasilayaa! Intii aannu hadalkii hayno, ayaa wasiir Maxamuud Xaashi, oo isagana ay marwadu wargeliysay, noo yimi. Markii aannu is waraysannay waxaa sababtii noqotay in madaxweynuhu ka werweray xusuustiisa oo hoos u dhacday, ugu danbayn se uu madaxweynihii ka noqday go’aankii markii ay qoys ahaan gaar u wada hadleen.
Markii madaxweynihii soo baxay ayaannu la fadhiisannay, isaga oo werwerkii xilka iyo dareenka xanuunkuba ka muuqdo. Xirsi ahaana waan dareemayay intii aannu wada shaqaynaynay in xusuusta madaxweynuhu si weyn hoos ugu dhacday, waxaanay ku sii badan jirtay mar kasta oo culayska shaqada ee welwelka iyo walbahaarku ku bataan (stressful). Marka se culayska laga ilaaliyo ee hawsha laga yareeyo wuu fiicnaa, in kasta oo uu ahaa qof waayeel ah oo sannad kasta wax ka dhacayaan.
Himilo sarraysa, niyad wanaagsan, sabir iyo dedaal aan joogsi lahayn ayaa lagu gaadhaa higsiga meelaha sare ee tartanka nolosha loogu jiro ama nolosha danbe laysugu diyaarinayo. Haddaba haddii aad diidday in aad dadweynahaaga ka mid ahaato oo doonayso in taariikhdu wax kaa xusto, adiga ayay kuu taallaa doorashada in taariikhdu si fiican kuu xusto ama in ay si xun kaaga warranto, waxaanad noqonaysaa labada tusaale midkood.
Tags: Imaatinkaygii Madaxtooyada (Cheif Of Cabinet)
Next post Wasiirkii Madaxtooyada ee Maamulka Somaliland
Previous post Hoggaamiyaha Ayaa Soo Saari Kara Hoggaamiye!